Babonga izinhlelo zeKHOSOMBA LAMAJITHA abezempilo KwaZulu-Natal – SIVUBELAINTUTHUKO
Babonga izinhlelo zeKHOSOMBA LAMAJITHA abezempilo KwaZulu-Natal
UMNYANGO wezeMpilo KwaZulu-Natal ophathiswe uNkz Nomagugu Simelane ugezeke igilo ngomkhankaso wawo IKHOSOMBA LAMAJITHA njengoba bewuhambele kumasipala waseMooi-River uyokhuluma nabesilisa ngezindlela zokuzinakekela ngakwezempilo.
UNgqongqoshe wawo lo mnyango uNkz Simelane obehola ithimba lomnyango wakhe nezikhulu zikamasipala waseMooi-River nezezifunda saseMgungundlovu utshele abezindaba abebeyingxenye yokuhanjelwa kweKHOSOMBA LAMAJITHA ukuthi loluhlelo lwabo baqale ukulwethula kumasipala waseMhlathuze futhi bazimisele ukuhambela wonke amalokishi KwaZulu-Natal. Uthe bahlele ukuhambela izizinda lapho abesilisa bevame ukuhlanganela khona kabafunanga ukulinda ukuthi kuze kube yibona abesilisa abeza kubona bewumnyango.
UNkz Simelane uthe IKHOSOMBA LAMAJITHA lizonxenxa abesilisa ukusondelana nezikhungo zezempilo ukuze bazi ngesimo sempilo yabo. Ukhale ngabesilisa abahambela kude kakhulu nezikhungo lokho okwenza ukuthi banganaki noma ngabe kukhona asebephila nazo ezicashe egazini. “Le ndlela yokuhambela abesilisa lapho bekhona isisiza kakhulu ngoba siya kubonan gqo siphethe zonke izinsiza zezempilo ukuze sibasize ngaleso sikhathi lapho sibafice khona. Okuyikhona esikubeke eqhulwini ngukukhuthaza ukusoka kwabesilisa, ukwazi ngomdlavuza wamankwahla nokukhuthaza ukuba bagomele iCOVID-19 njengoba bebonakala bemanqika ekugomeleni lo mkhuhlane. Sikubone kukuhle ukuthi siye kubona ngoba uma benganakiwe bayazihlalela umuntu agcine esefa ngoba engalutholi usizo ebulawa yisifo ebesinganqandeka kodwa wathalalisa. Kuningi esikutholile kubona ngesikhathi sixoxa nabo sakwazi nokubachazela ngokubaluleka kokuhambela izikhungo zezempilo kumuntu ukuze agcine ephila. Kusijabulisile ukuthi emahoreni amabili sikwazile ukusoka abesilisa abawu-15 kube kusekhona nabanye abebesalindile. Lokho kusikhombisile ukuthi abantu besilisa bayadinga ukunakekelwa ngokwezempilo kodwa inkinga yabo ukuhambela izikhungo lapho bezothola khona usizo,” usho kanje.Ephetha uNkz Simelane uthe kubahlabe umxhwele ukubona abesilisa bebambisene nomnyango kuloluhlelo lweKHOSOMBA LAMAJITHA. Uthe basibone sisikhulu isidingo sokuthi izinsiza zezempilo zihambele izizinda lapho behlala khona ngoba babonile ukuthi bayakhululeka ngokubuza ezinye zezinto okungafani noma umuntu eziyele emtholampilo. Uthe bathole nokubafundisa ngomdlavuza wesibele ngoba ngokujwayelekile bekwaziwa ukuthi uhlasela abesifazane kuphela kanti kakunjalo nabesilisa uyabahlasela
Kuliwa nokusetshenziswa kwezidakamizwa ezingemukelekile eMandeni
TSEPO MOTLOKOA LUBUNGAZWE ngokuhlukile usuku lwamalungelo abantu eMandeni njengoba umasipala wakhona ngokubambisana neMandeni Constituency Parliamentary benze imashi ezitaladini zaleli dolobha bexwayisa ngokusethenziswa budlabha kwezidakamizwa emphakathini. NgoMsombuluko weholi lomhlaka 21 March umphakathi waseMandeni ube nemiviliyelo edolobheni lalendawo uphume umkhankaso wokukhuza lesi sihlava sokusetshenziswa kwezidakamizwa ezingekho emthethweni. Lo mkhankaso uqale eSiyavikela Primary School wayosongwa eSibusisiwe Community Hall. […]
EyaseMandeni icela umphakathi ubekezele ngolwezikhukhula
TSEPO MOTLOKOA IMEYA kaMasipala waseMandeni uMnu Thabani Mdlalose ithi amaphaphu phansi emphakathini owakhele lo masipala ngoba ithimba lezinhlekelele kalilali lisebenza ubusuku nemini ukubhekana nomonakalo owenzekile kade kuhlasele izikhukhula ezishiye isifundazwe saKwaZulu-Natal singene ngaphansi kwesimo sezinhlekelele. UMnu Mdlalose usho kanje kade nethimba aliholayo kumasipala behambele ezinye izindawo ezingaphansi kwaseMandeni beyobheka umonakalo odalwe yizikhukhula okusale inqwaba yabantu bengenamakhaya […]
I-MOWCS ilekelela abamukelwe ngamakhaya KwaZulu-Natal
TSEPO MOTLOKOA LUNGENA lulakanyana usizo lokusebenzisana noHulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal oluya kubantu abakhahlanyezwe yizikhukhula ezishiye izingxenye zedolobha laseThekwini, KwaDukuza nasoGwini abantu bengenamizi abanye balahlekelwa yimiphefumulo. Abe-Meals On Wheels Community Services (MOWCS) okuyinhlangano engenzi nzuzo yaseGoli ingenzinye zezinkampani eseziphumele obala zithembisa ukwelula isandla ukuze labo ababe yizisulu zezikhukhula bangaziboni besele dengwane bagcine sebezibiza ngondingasithebeni. I-MOWCS ikhiphe isitatimende […]
Owemidlalo yomoya kuKhozi FM ulekelela izikole zaseMkhumbane
Imali izwa enye kuMasipala waKwaDukuza